VaTrump Vokonzera kuGeda Geda kweMeno muAmerica neKuramba Kusaina Bhiri reKubatsira Munguva yeCovid-19
Zvita 27, 2020
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump vakaramba neMugovera manheru kuisa ruoko rwavo pachibvumirano chakaitwa nematare eCongress neSenate kubatsira vanhu vemunyika yavo vawirwa nedambudziko rechirwere cheCovid-19. Izvi zvinonziwo zvinogona kukonzera kuvharwa kwemamawe mapazi ehurumende.
Kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende kuri kutarisirwa kutanga neChipiri kana VaTrumo vakaramba vakatsika madziro. Asi nhengo dzedare reCongress dziri kutarisirwa kudzoka kudare nechimbi chimbi kubva kuzororo rekisimusi negoredvza kuti dziwedzere mazuva ekuti mapazi ose ehurumende arambe achishanda.
VaTump vanoti havasi kufara nenyaya yekuti matare eparamende aya akapa munhu mumwe chete madhora mazana matanhatu ekubatsirikana munuva yeCovid-19 kwete zvuru zviviri sezvanoti vari kuda vachitenderana nebato rinopikisa remaDemocrats.
VaTrump vakanyorawo padandemutande ravo reTwitter vachiti bhiri iri rine dzimwe mari dzisina nematuro ose dzinofanira kubviswa.
Vari kutaura mashoko aya kunyangwe hazvo nhengo dzebato ravo remaRepublicans dziri idzo dzisiri kuda kuti vanhu vapihwe mari yakawanda. VaTrump nemhuri yavo vari pazororo kuFlorida.
Bhiri iri rinotarisrwawo kubatsira vanhu mamiyiyoni gumi nemana vakarasikirwa nemabasa. Vakasarudzwa kutungamira nyika uye vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa 20 Ndira, VaJoe Biden vamoti VaTrump vanofanira kuti vaise runyoro rwavo pabhiri iri sezvo kusaita izvi kuri kuisa hupenyu hwevanhu parumananzombe. VaBiden vari kumba kwavo kuDelaware.
Nhengo dzedare reCongress dziri kutarisirwa kuvhota neMuvhuro kupidigura danho rainge ratorwa naVaTrump rekuda kuramba kuisazve runyoro rwavo pabhiri rimwe rekubatsira bazi rezvekudzivirirwa kwenyika.